Hatreto tsy mbola nisy fijerena ny vahaolana, na efa nisy aza ny tolo-kevitra nomen’ireo mpitokona, mangataka mpitantana vonjimaika izy ireo hampandehanana ny raharaha, fa raha mbola ireo mpitantana amin’izao no mitantana dia tsy handeha mihitsy ny fampianarana, raha ny fanazavan’ny solontenan’ny mpampianatra.
Tokony nanomboka androany ny “contrôle continu” na fanadinana faharoa raha ny tetiandro, saingy izao mbola tsy mandeha izao ny fampianarana.
Teny an-toerana ny EMMOREG nandamina ireo mpianatra izay saika nihoa-pefy. Nomarihin’ireto mpitokona ireto fa tsy misy ifandraisany amin’ny savorovoro politika misy eto amin’ny firenena ny raharahan’ny LTP. Safidin’ireo andiana mpianatra manokana no nanaraka ireo mpitolona notarihin’ny solombavambahoakan’ny fanovana fa tsy ampirisihin’ireo mpampianatra araka ny feo mandeha.